JESMOND တွင်ရေစုပ်စက်ငှားရမ်းခြင်းဖြင့်နယူးကာဆယ်ကျောင်းသားတစ် ဦး သည်ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်ငွေရှာနေသည် - သတင်း
Jesmond တွင်ရေစုပ်စက်ငှားရမ်းခြင်းဖြင့်နယူးကာဆယ်ကျောင်းသားတစ် ဦး သည်ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်ငွေရှာနေသည်
နယူးကာဆယ်တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသား၊ အသက် ၂၁ နှစ်ရှိဟယ်ရီစထရွတ်ဒစ်သည်သူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော NCL Hot Tub Hire ဖြင့် MIND ပရဟိတလုပ်ငန်းအတွက်ငွေရှာဖွေသည်။
နယူးကာဆယ် Tab သည်ဟယ်ရီအားသူ၏ရေပူရေစုပ်စက်အကြံဥာဏ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုခဲ့သည်၊ ၎င်းသည် Jesmond အိမ်ပါတီပွဲများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောစိတ်ကူးဟုသူကပြောသည်။
သူက 'ဒါဟာစတာပါပဲ၊ ငါတကယ်လုပ်မယ်လို့ဘယ်သူမှမယုံကြဘူး။ Jesmond ရှိ hot tub ငှားရမ်းခြင်းသည်အမှန်တကယ်အလုပ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်စတင်သဘောပေါက်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်မည်မျှနီးကပ်သည်ကိုစဉ်းစားသည်။ တခြားသူတွေကအဲဒါကိုသုံးရတာအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းပြီးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ငါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားနိုင်မှာပါ။ '
NCL Hot Tub Hire နှင့်ပျော်မွေ့ရန်သင်မျှော်လင့်ထားသည့်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်း
ဟယ်ရီကသူ၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်ကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်စေရန်အတွက်မကြာမီကအခြားရေပူရေပူတစ်ထပ် ၀ ယ်ရန်သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောပြခဲ့သည်။ သူက 'အခြားလူတွေအိမ်တွေကိုငှားဖို့နောက်တစ်ခုဝယ်လိုက်တယ်။ အဖြစ်ဝေးညနပေိုငျးဖျော်ဖြေရေးသွားအဖြစ်ကတက်ရှိတယ်။ ညစာစားပြီးတဲ့နောက်ဒါမှမဟုတ်ညအိပ်ပြီးနောက်မှာအမြဲတမ်းအားရစရာတစ်ခုပဲ။ တုံ့ပြန်ချက်များယခုအချိန်အထိအလွန်ကြီးစွာသောခဲ့ငါတကယ်တိုးတက်အောင်မျှော်လင့်ပါတယ်နှင့်ကျွန်တော်နှင့်အတူအချို့သောကောင်းသောပြုနိုင်သည်။
'ငါဟာငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ကိုစိတ်ရှုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ လာတာပဲ။ ဒါပေမယ့်မကြာသေးခင်ကထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာတွေနဲ့စိတ်ကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းတွေကြောင့်ဒီစိတ်ကူးဟာပရဟိတလုပ်ငန်းအတွက်ပိုက်ဆံစုဆောင်းဖို့အတွက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်အတူရုန်းကန်နေသူများကိုကူညီရန်အမြတ်ငွေ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို Mind သို့လှူဒါန်းမည်ဖြစ်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုပေးရန် NCL Hot Tub Hire သည်၎င်းတို့နှင့်ပြိုင်ဆိုင်နေသည် Instagram အကောင့် (@nclhottubhire) သင်နှင့်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်လေးရက်အတွက်ရေပူရေပူအတွေ့အကြုံရရှိရန်အခွင့်အလမ်းအတွက် prosecco နှင့် flute များသေတ္တာတစ်လုံး။
? ပြိုင်ဘက်အချိန်လား !! သင်၏ဥယျာဉ်အတွက် Lay-Z Spa ကိုအခမဲ့ငှားရန်သင်နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုအခွင့်အလမ်းပေးနေသည်။ !!!! သင်လုပ်နိုင်သမျှသည်အနိုင်ရရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ - - @nclhottubhire ကိုလိုက်နာပါ။ •ဤစာမူကိုဖတ်ရှုပါ။ ? PRISECCO ၏ပုလင်း ၆ ခု၊ ရှမ်ပိန်ပုလွေများ၊ ဖောင်းပွများနှင့်အခြားအရာများစွာပါဝင်သည်။ ဘယ်သူဘဟားမား?!?! xoxo - လူ ဦး ရေ ၆ / ၇ ယောက်အထိရှိနိုင်တဲ့သင့်ရဲ့အားလပ်ချိန်မှာစတာလင်ပေါင် ၄ ရက်လုံးလုံးသင့်အတွက်ပါ။ - ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၂ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ (၂၃) ရက်နေ့တွင်ကြေငြာရန်အနိုင်ရ !!!! ?? ကံကောင်းပါစေ ?? - ** ၀ င်ရောက်သူများသည် Newcastle upon Tyne inရိယာတွင်နေထိုင်ရမည်၊ ရေရရှိရန်အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။ အခွားသော T & C ရဲ့သက်ဆိုင်ပါသည်။ **
မျှဝေသည် မင်းရဲ့တံခါးဆီကိုရေပူရေဘူးများ Jesmond (@nclhottubhire) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်၊ ၂၀:၆၆ နာရီ ၆:၅၆ အချိန်၊
Uni မှာတွေ့ရမယ့် bjjieest တနင်္ဂနွေကိုအနိုင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတာသူတို့ရဲ့ Insta ကိုသွားကြည့်ပါ။